ဝက်ဝံများနှင့်အကွာအဝေးများအပေါ် အခြေခံ၍ Polygon ကို Excel ဇယားတွင် Geofumadas တွင်တည်ဆောက်ပါ
စက်တင်ဘာ, 2008 AutoCAD-AutoDesk, downloads,, Microstation-Bentley, topografia
ကျွန်ုပ်တွင်ဝက်ဝံနှင့်အကွာအဝေးများရှိသည့်လမ်းကြောင်း၏အချက်အလက်များရှိပြီး၎င်းကို AutoCAD သို့မဟုတ် Microstation တွင်တည်ဆောက်လိုသည်။ AutoCAD ကိုအရင်ကြည့်ဖူးတယ် ဒါဟာသူ့ရဲ့လမ်းရှိပါတယ် Microstation တွင်ပြုလုပ်ပြီးပါက @dist <ပုံစံအောက်ရှိဒေတာအမျိုးအစားကိုအစာကျွေးရန် AccuDraw အားဖြင့်.
1 ။ input data ကို
ဤအဝါရောင်ဧရိယာဝင်နေကြတယ်, စံနမူနာအဖြစ်ဒီမှာဘူတာ, အကွာအဝေးနှင့်ဦးတည်ချက်သို့ ဝင်. နေကြသည်။
2 ။ ကနဦးညှိနှိုင်း
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးအချက်၏သြဒီနိတ်ကိုသိသည်ဟုယူဆပြီးအစိမ်းရောင်ရှိဇုန်၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မရှိပါကတန်ဖိုး (၅၀၀၀) (၅၀၀၀) ကဲ့သို့အနှုတ်သြဒီနိတ်များမပေါ်ပေါက်စေရန်တန်ဖိုးမြင့်မားစွာထားပါ။
3 ။ output data တွေကို
ဤသည် XY တစ်ကော်မာခှဲထုတျအတူ concatenated ကိုသြဒိနိတ်ထားပြီးကားအဘယ်သို့ထားတဲ့လိမ္မော်သီးထဲမှာမှတ်သားဒေသဖြစ်ပါသည်။
4 ။ အဖြစ် AutoCAD ကပေးပို့ပါ။
ရိုးရိုး "copy" ကို Excel ဖိုင်၏လိမ္မော်ရောင်inရိယာတွင်ပြုလုပ်ပြီး၊ AutoCAD တွင် polyline (pline) command ကိုသက်ဝင်စေပြီး 'paste' ကို command bar တွင်ပြုလုပ်သည်။ ရလဒ်ကတော့နိဂုံးချုပ်ရန်အတွက်သာရေးဆွဲသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်
သင်တစ်ဦး Excel ကို table ထဲမှာလမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေးပေါ်အခြေခံပြီးအနားတည်ဆောက်ဖို့ template ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည်ကူးယူခြင်းအတွက်သင်္ကေတပါဝင်မှုလိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် Paypal.
5 ။ Microstation ကပေးပို့အဖြစ်
Microstation အတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့ငါနီးပါးတူညီမယ့် template ကိုပေမယ့် Key ကို-in ကို command ကို Microstation ၏ယုတ္တိဗေဒကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
Microstation များအတွက် template ကိုကြည့်ရှုပါ.
ယခင် Post မှ« Previous Microstation အတွက်လမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေးနှင့်အတူဒေတာ Enter
Next Post Topological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Microstation Geographicနောက်တစ်ခု»
56 "Excel ဇယားရှိဝက်ဝံနှင့်အကွာအဝေးပေါ်အခြေခံပြီး Polygon တည်ဆောက်ခြင်း" အတွက်တုံ့ပြန်မှု
ဇွန်လ 2018 ပု
spam များကိုအပါအဝင်သင့်အီးမေးလ် Check, ဒေါင်းလုဒ် URL ကိုအဲဒီမှာလာပါတယ်။
ဟိုဆေး သူ says:
ထိုအခါငါဖိုင်ကို download လုပ်ပါဘူးဘယ်လို, ထိုအလှူငွေဖြစ်စေအပ်သလော
ထိုအခါသင်သည် Paypal ဖြင့်ပြုပါရန်ရှိသည်။
Anstacio Montoya သူ says:
, Anastacio မင်္ဂလာပါ
El အပိုဒ် link ကို ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ဖို့ option ကိုညွှန်ပြ,
ကျွန်တော်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ၎င်းကိုမပေါ်ပါက၎င်းကိုအအေးခံရန် F5 ကိုအသုံးပြုပါ။
အောက်တိုဘာလ 2014 ပု
သင်၏မေးလ် Check, တခါတရံတွင်သူက spam များကိုတတ်၏။
သငျသညျ4ရက်အတွင်းကုန်ဆုံးသောဒေါင်းလုပ် URL ကိုအတူသတင်းစကား, llegarte သငျ့သညျ။
သင်သည်အမှုရောက်သောရှိပါကကျွန်တော်တို့ကို geofumadas.com (မှာ) အယ်ဒီတာကိုသိရ
အဲလက်စ် Mor သူ says:
ငါ paypal ခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ template ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ?
ဒို Henriquez သူ says:
ဒီဇင်ဘာလ 2013 ပု
ငါ plantillaExcel အားဖြင့်သူ၏နာမကိုမှ Pay ကို Pal အားဖြင့် dineor စေလွှတ်သောသူတို့အားပြောပြချင်ခဲ့တယ်
အာတူရို Salinas သူ says:
construer ArcGIS အတွက် COGO ကိုအသုံးပြုဘို့အလွန်ကောင်းသော
သငျသညျ Excel ကိုအတွက် concatenate သုံးစွဲဖို့ရှိသည်, ဒါပေမယ့်နေရာလိုင်းသုံးနိုင်သည်။
ထိုအခါ txt ဖိုင်ထဲမှာ paste နှင့် Keyin ခေါ်
CMV သူ says:
ငါတယောက်တည်းလည်းအမှတ်မိုဃ်းတိမ်သည်ဆိုပါကမအနားကိုတက်စေပါလိမ့်မယ်သောလိုင်းများငါ့ကိုစွန့်ခွာမ MicroStation အတွက်လုပ်ပေးအဖြစ်?
သကြားလုံး သူ says:
ဇန်နဝါရီလ 2012 ပု
Excellent ကသင့်ရဲ့ Excel ကို !! ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော်!
နိုဝင်ဘာလ 2011 ပု
အခြားဆောင်းပါး၌ငါဖိုင်ကို txt Excel ကိုအတွက် concatenation သုံးပြီး Microstation နှင့်အတူဤလုပ်ဖို့အခြားသောလမ်းထုတ်ဝေလျက်နှင့်မ
da သူ says:
အမှန်မှာကပုံစံနှစ်ခုကိုသြဒီနိတ်လက်ခံသောမည်သည့် program ကို run နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်သည် ArcGIS များအတွက် extension များရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာကြောင်းခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုစကားပြောဖူးပါဘူး။
rocker သူ says:
မင်္ဂလာပါပဲငါ့ကိုဒီ post နှင့်တကွအသက်ကိုကယ်တင်ငါဒါကာပိုမိုလွယ်ကူဤအစီအစဉ်လုပ်ဖို့လမ်းသို့မဟုတ်သင်ပြီးသားအချို့သောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်မှန်လျှင်, ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပါနှင့်သာ ArcMap များအတွက် fit ArcGIS တစ်ဦးအနားစေရန်လိုအပ် ဒီအကြောင်းပို့စ်, ဒါပေမယ့်ဟေးငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ကြောင့်လည်း ArcGIS မှသွားတိုင်ထားရန်ကောင်းသောလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!! ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိဂုဏ်ယူပါတယ်, saludooooos ။
ဝီလီ သူ says:
အနားများအတွက်ကျန်နေခဲ့လျှင်ယခုအကူအညီအတွက် ... ^ _ ^
Start ကို, Control Panel ထဲက, ဒေသ
အကယ်၍ မမှန်ကန်ပါကသင့်နိုင်ငံကိုပင်ရွေးချယ်ပါက "စိတ်ကြိုက်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဒdecimalမသင်္ကေတနှင့်ထောင်နှင့်ချီသောခွဲခြားခြင်းသင်္ကေတကိုပြောင်းပါ။
ငါ AutoCAD အတွက်ပုံဆွဲရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အောက်ပါအတိုင်းပြဿနာ radiates ။
အဆိုပါပြဿနာကိုငါကာလအဘို့ (စ) ကော်မာကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ် (။ ) ကျွန်မရုံး 2007 ငါ၏အရုံးခန်း Exel စားပွဲပေါ်သည်။
ကာလအဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်ရှိရာ (။ ) အဲဒီမှာကော်မာ (,), ငါ၏ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါသည်။ !!
Eferrari သူ says:
အောက်တိုဘာလ 2010 ပု
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် CadStre အတွက် MicroStation ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုများကိုထည့်သွင်းချင်ခဲ့သည်၊ သူတို့က polygon အချက်များအပြင်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုလျှင်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ txt စာတန်း၏ခေါင်းစဉ်တွင် "post smartline" ကိုရေးသည်။ ကိုသြဒီနိတ်တစ်ခုစီတွင် xy = x ကိုသြဒီနိတ်၊ y ကိုသြဒီနိတ်ထည့်သည်။ အားလုံးအပေါ်။ Key-in entry တွင် @C: \_ name နှင့် file.txt ၏တည်နေရာကိုရေးသည်။ အကယ်၍ အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုက input ကိုတန်ဖိုးထားမည်ဆိုပါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏သီအိုရီဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 2010 ပု
ကောင်းပြီ၊ အမှန်မှာ၊ အမိန့်သည် X - Y ဖြစ်သည်
francisco barron Hernandez သူ says:
ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်မကိုသြဒီနိတ် yx လေယာဉ် bolteado get ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ .. AutoCAD အတွက်အပြားစေရန်လိုအပ်ပါတယ်
အိုင်ဗင် သူ says:
အကူအညီ, ငါတကယ်ကဒီစားပွဲနှင့်အတူအလုပ်တွေအများကြီးချွေတာ, ဖော်မြူလာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဂုဏ်ပြုလွှာအလွန်ကောင်းသောအလုပ်အတွက်သင်ကအစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ..
Juan လူး Cordova သူ says:
ငါဟာ v8i မတှေ့
v8 XM ထုတ်ဝေ
ဘယ် version ကိုသငျသညျဆိုရသလော
V8 သို့မဟုတ် V8i
သငျသညျတံစဉ်များကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ငါ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့်တော်တော်များများ tools တွေရှိပါတယ်လျှင်ငါ MicroStation site ကို, ရှိသည်မဟုတ်ကဲ့သို့သော။
ငါ agredece ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီကောင်လေး MicroStation site ကိုရှာကြံကောင်လေးကျေးဇူးတင်အတည်ပြု
သင်တစ်ဦးတည်းကမပွုနိုငျလိုပဲတစ်သေတ္တာလမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေး Microstation ဆိုက်ကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူလုပ်ပေမယ့် AutoCAD မြို့ပြကျူးကျော်အတူရန်။
သို့သော် အကယ်. သင်ဤဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့ပြောင်းပြန်လုပျနိုငျ ဒီစားပွဲ Excel
သငျသညျဖြေရှင်းနိုင်အဖြစ်ကောင်းပြီငါတစ်ဦးအနားတစ်သေတ္တာဆောက်လုပ်ရေး (ဝက်ဝံနှင့်အကွာအဝေး) ရ MicroStation v8 XM သို့မဟုတ် v8i realizadaen, Civilcad ၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုအဖြစ်သာ tool ကိုအနား tebas နှင့်မပေးစားနိုငျပါပြဿနာတစ်ခုရှိသည်, ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းကိုရှာဖွေ သူတို့ကိုအကြှနျုပျကိုကူညီ agredecira, အဆွဲသို့မဟုတ် pligonal အတွက် box ကိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပိုက်ထုတ်လုပ်
ငါပေးသောကူညီနိုငျကွောငျးလုပ်ဖို့ LISP မြင်ကြပြီမဟုတ် ဤသူကား ။ ဒီကုဒ်မှာစကားဝှက်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်တွေပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်သင်စုစည်းထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့လေ့လာရေးကော်လံထဲမှာထားခဲ့မယ်၊
Faviano သူ says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခုခုရှင်းလင်းလက်လွတ်ထင်, ငါကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာကိုရှောင်ရှားချင်ပါကကျွန်မ Excel ကိုဖိုင်ကိုတင်သွင်းနေဖြင့်ဒေတာများကြံစည်တဲ့နှုတ်ခမ်းကို အသုံးပြု. automated ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသင်သို့မဟုတ်အလှူငွေမေး Das SO ဒီနည်းကိုစာမကျြနှာ INTERERESANTE ဂုဏ်ပြုပါသည်။ ကောငျးလိုခငျြသိရန်ငါ Excel AutoCAD တွင်ဤအချက်အလက် graphed ကိုကူညီနိုင်လျှင်, ME အချက်အလက်အားလုံးကို ID ကိုနဲ့လိုင်းတစ်ခုသာဆွဲခြင်း, XY လေယာဉ်ကနေမျဉ်း TOP, အလျား, Azimuth နှင့်ရှို (မျိုးကွဲများအပါအဝင်) ကိုသြဒိနိတ်။
အရှေ့မြောက်မြောက်မျက်နှာပြင် ID ရှည်လျားသည်။ »« AZIMUT »« INCL ။ »
Ing ။ ဟူဂိုAlarcón သူ says:
မင်းကိုချီးကျူးပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့စာမျက်နှာဖြစ်ပြီးဒီမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်ပထဝီအနေအထားကိုမြှင့်တင်ပေးထားသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာဖြင့် ...
ငါသည်လည်းပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ် gedesics) နှင့် UTM များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးနေသည်။ ငါပထဝီအနေအထားအရမြေမျက်နှာသွင်ပြင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူနည်းနည်းပင်ရုန်းကန်နေရသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ geodesics မှပြားချပ်ချပ်စနစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ post လုပ်ပြီးသော post သို့မဟုတ် process လုပ်ခဲ့သောအချက်များသို့မဟုတ် vertices များကိုသူတို့ကိုစုစုပေါင်းဘူတာရုံသို့မဟုတ်သမားရိုးကျပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ အကွာအဝေးကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်ခြင်း ... သင်၏မှတ်ချက်များသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည် ... tampico, tamaulipas, mexico မှကျေးဇူးတင်စကားနှင့် ...
နှင့်ညှိနှိုင်းပထဝီသို့မဟုတ် UTM ရှိပါသနည်း
jeijchang သူ says:
ကောင်းသောမိတ်ဆွေများကိုငါ AutoCAD မှကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ဂျီပီအက်စ်သုံးဖြုန်းနိုင်သကဲ့သို့ကူညီနိုင်လျှင်သိလို
ဒါကြောင့်ဆိုပါက, control panel ထဲကဒေသဆိုင်ရာ settings ကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်အကြောင်းတည်းနှင့်ကော်မာထောင်ပေါင်းများစွာကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းဒဿမအမှတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လျှင်ကြည့်ပါ။
ယောရှု သူ says:
ငါသိတယ်ငါပြtheနာကော်မာနှင့်အချိန်ကာလ၏ configuration ကိုတည်ရှိသည် ... ။ Excel မှ
ahhhhhhhh ကောင်းသောစာမျက်နှာ huh ...
ok ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပဲထွက်လာတယ်။
အချက်အလက်မှားယွင်းစွာကူးယူမိစဉ် ... ထောင်ပေါင်းများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Excel ကိုအတွက်ဧရိယာကို Select လုပ်ပါ
အဆိုပါ AutoCAD command line ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ယောရှုသည် သူ says:
မှန်ကန်သောအချက်အလက်များကိုကူးရန်မမှားပါ၊ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ Excel ၌အခြားပုံစံရှိသည်။ ၎င်းတွင်ပုံစံများကို align လုပ်ခြင်းသည်ဤပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ကိစ္စရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ဤသတင်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်။ » 2d အချက်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောသော့ချက်စာလုံး» Autodesk မြေကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါငါနားမလည်ဘူး
အကယ်၍ သင်သည်ပုံစံကို Excel ဖြင့်ပို့လိုပါကသင်၏အီးမေးလ်ကိုသာရေးပါ။
ငါ၌ဤပုံစံနှင့်ဆင်တူသောအခြားပုံစံရှိသည်။ ၎င်းသည်လမ်းညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် autodesk ပြည်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ ဤပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပုံစံကိုငါအသုံးပြုထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေသည်။ ထို့နောက်၎င်းသတင်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်။ ကျွန်တော့်အနားဟာပေါ်မလာပါဘူး၊ ငါဒေတာကူးယူတာမှားနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ဖိုင်ကို Excel တွင်ဖြတ်သန်းလိုပါကသင်၏အီးမေးလ်ကိုရေးပါ။
AAA ကျေးဇူးပြု၍ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုတွေ့ရှိပြီး၊ အသံကိုလက်ခံပါက အကယ်၍ ပြPROနာသည် Excel တွင်ရှိသော Auto CAD Configure သို့မဟုတ်အချို့သောအမှားများဖြစ်ပါက…။
လိုအပ်သော 2d point or option သော့ချက်စာလုံးသည်လည်းကျွန်ုပ်ပေါ်လာသည်။ သင်သိလျှင်အဖြေကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။
jcpescotosb သူ says:
အဆိုပါ 2009 နိုင်ပါစေ
အလွန်ကောင်းမွန်သောဖိုင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီလိမ့်မည်။ အသွားအလာလမ်းကြောင်းနှင့်အဆင့်ကို UTM သို့မည်သို့ပြောင်းလဲမည်ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေပြီဖြစ်သည်။ ငါကပွင့်လင်းလမ်းကြောင်းများအတွက်စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်
သင့်တွင်ကော်မာနှင့်အစက်အမျိုးအစားမှားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်နေရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာချိန်ညှိချက်များတွင်စစ်ဆေးသင့်သည်။ မင်းမှာဒimမကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ကော်မာတွေကိုထောင်နဲ့ချီတဲ့ခွဲခွာခြင်းလိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
GEMASA သူ says:
MicroStation ငါ AutoCAD 2009 အတွက် auditioned ကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်မရ
ငါ Microstation အတွင်းအချို့သော V8 XM ညာဘက်အမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
1 ။ polyline command ကို
2 ။ 0,0 ရေးရန်
3 ။ ဝင်ရောက်
4 ။ လိမ္မော်ရောင်ဇုန် Excel စာရွက်ထဲမှာမိတ္တူ
5 ။ က command line ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
6 ။ ctrl + v ငါးပိသို့မဟုတ်
7 ။ zoom ကိုအပြည့်အဝမြင်ကွင်းကို enabled
မျက်ဝန်း သူ says:
ဘာဖွစျတစ်ဦးက AUCTOCAD COORDENANAS မြေမျက်နှာသွင်ပြင် ENTER ကိုလို IS ။
ငါကူးရန်ကိုနှိပ်သောအခါငါသွားပါမယ်။ POLILINE WRITE 0,0 ကိုရွေးချယ်ပြီးအောက်ပါအချက်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ဒီပုံပေါ်လာသည်။ Arc / Halfwidth / Length / Undo / Width
AND ငါဒီနည်းကို OMISO ဖြစ်စေပြီး PEGO ကိုလုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် (2D point or option သော့ချက်စာလုံးလိုအပ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ်လီဂွန်ရပ်တန့်မှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိပါ။
ဇန်နဝါရီလ 2009 ပု
Rene FABRICIO ကက်စထရို သူ says:
ဒီဇင်ဘာလ 2008 ပု
ကျနော်တို့ကဤသင်တန်းများမျှပထဝီကိုသြဒီနိတ်များမှာကြောင့် UTM ကိုသြဒိနိတ်ဆွဲလို့မရဘူး, ဤလမ်းကြောင်း၏ထင်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောအလှူငွေတစ်ကော်မာနှင့်အတူခွဲထုတ်ကိုသြဒိနိတ်
နိုဝင်ဘာလ 2008 ပု
En ဒီ post ကျနော်တို့မှတ်ကနေပတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းအဖြစ်စောင့်ကြည့်။
ရီကာဒို သူ says:
အလွန်ကောင်းသော spreadsheet, ကလူသိများတဲ့အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ Rumbos, Azimuth, Distance, Azimuths နှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါတစ် ဦး polygon ကနေပြုနိုင်မည်နည်း